Laba Manchester maxaa kala haysta - BBC News Somali
Laba Manchester maxaa kala haysta
22 Abriil 2012
Tartanka dusha sare ee kubadda cagta England ee Premier League ayaa xiisad yeeshay, iyadoo mar kale cidda koobka ku guulaysan karta ay noqotay mid aan la hubin.
Waxaa rajadu bilaabatay markii si lama filaan ah kooxda hogaanka haysa ee Manchest United oo cayaarta hadii ay badan lahayd la hubi lahaa in ay aad ugu dhowaatay in koobka ay qaadato maadaama ay ilaa sagaal dhibcood ka hormari lahayd kooxda ku soo xigta ee Manchester City oo goor dhow iyadunga la cayaaraysa kooxda Wolves oo ah kooxda liiska dhibcaha ugu wada hoosaysa.
Kooxda Everton ayaa celisay oo hakad galisay Manchester United oo ujeedkeedu ahaa in ay la fakato koobka oo shakigaba ay meesha ka saarto.
Cayaaryahanka Peinaar ee u dhashay dalka Koonfurta Africa, ayaa suurtagaliyay taa maadaama uu goolkii barbardhaca cayaarta oo shan daqiiqo ka harsan tahay goolkii afaraad u dhaliyay Everton.
Waxaa ka horeeyay ilaa todoba gool oo kale oo labada koox ay u kala dhaliyeen Rooney oo laba dhaliyay Nani iyo Wellbeck oo Manchester United goolasha u kala dhaliyay halka kooxda Everton cayaaryahanada Jalvic uu laba gool dhaliyay, Fellani uu goolka dhaliyay.
Cayaarta oo wax ka yar toban daqiiqo ka dhiman tahay ayay Everton dib ugu soo laabatay cayaarta markii ay shan daqiiqo gudahood laba gool u kala dhaliyeen Jelavic iyo Pienaar.
Manchester City ayaa iyaduna la cayaartay kooxda Wolves, wayna ka badisay.
Waxay kaga badisay laba gool iyo eber, iyadoo labada gool ay u kala dhaliyeen Aguero iyo Nasri labada qaybood ee cayaarta.
Cayaaraha kale ee maanta dhacaya kooxda Liverpool ayay kulmayaan West Brom.
Liverpool oo gurigeeda lagu cayaarayay, ayaa laga guulaystay. West Brom 1-0 ayay ku badisay.
Liverpool tobanka koox ee sare ayay ka mid tahay halka West Brom ay booska tobanaad soo gashay markii ay ka badisay Liverpool.
Kooxda Wolves way ka haraysaa tartanka soo socda. Waxayna noqonaysaa kooxdii ugu horaysay ee harta xilli cayaarteedkan.
Kooxaha kale ee laga cabsi qabo in ay dib u laaban karaan waxaa ka mid ah Blackburn, Bolton, QPR iyo Wigan.
Dhinaca sare Man United 3 dhibcood oo kaliya ayay hadda ka horaysaa Manchester City.
Laba Manchester waxay kulmayaan 30 April oo ah Isniinta soo socta fiidkiia, waana cayaar lagu tilmaamayo in ay u dhiganto mid kama dambays ah ama final.